Kooxdii u baahan kaalinta koowaad ee Premier League sow Kanté ha qaadato maaha?! – Gool FM
(London) 19 Dis 2016 – Xiddiga kooxda Chelsea ee N’Golo Kanté ayaa muujiyey dadaalkiisa, waxaana kooxdii uu ku biiraaba ay saldhiganaysaa kaalinta koowaad ee horyaalka Premier League.
Xilli ciyaareedkii hore ee 2015/16 oo uu la joogay kooxda Leicester City 17 kulan oo ay ciyaartay xilligaan oo kale waxa ay ku jirtay kaalinta koowaad, halka Chelsea ay markaas ku jirtay kaalinta 15-aad 17 kulan oo ay ciyaartay.
Xilli ciyaareedkan hadda socda ee 2016/17 oo uu Kanté la joogo kooxda Chelsea 17 kulan oo ay ciyaartay waxa ay ku jirtaa kaalinta koowaad, micnaha Blues ayaa hoggaanka u haysa horyaalka Premier League, halka Leicester City ay ku jirto kaalinta 15-aad kaddib 17 kulan oo ay ciyaartay.
Leicester City ayaa hoos u dhac laga dareemayaa markii uu ka soo tagay N’Golo Kanté, halka ay Chelsea muujisay sare u kac aad u sarreeya markii ay la soo wareegtay xiddigan reer France, sheekada ayaana noqonaysa ‘kooxdii u baahan kaalinta koowaad ee Premier League sow Kanté ha soo qaadato maaha?!’.